ED - Your Brain On Porn ကိုတရားအားထုတ်ရန်တရားအားထုတ်ရန်
Gerard V. Sunnen, MD များက
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြောင်းလဲပြုမူမှု၏အလားအလာ ပို. ပို. စူးစမ်းခဲ့သည်။ hypnosis, ဇီဝကမ္မထိန်းချုပ်ခြင်း, အပန်းဖြေလေ့ကျင့်ရေးအဖြစ်ဘာဝနာနည်းစနစ်အပါအဝင်ကုသမှုပုံစံများအသိအမြင်အဆင့်ကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်ကိုယ်ထင်ရှားဖြစ်စဉ်များ Self-စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သက်ရောက်မှု (; Griffith, 1973 Schwartz, 1972) နဲ့သတိထိန်းချုပ်မှု၏ဧရိယာသို့ပေါ်လာနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြကြသည်။
ဘာဝနာကုသမှုကိုနှိုးဆွပေးသောအခြေအနေများကိုပြုပြင်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည် (Deikman, 1963; Maupin, 1969) ။ အိန္ဒိယ yogis (Brosse, 1946) ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုကသူတို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုပြသခဲ့သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ ဘာဝနာလေ့ကျင့်မှုလေ့လာမှုများသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်းနှေးကွေးခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်သုံးစွဲမှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ အရေပြားကူးစက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊ Wallace & Benson, 1961; ။ Benson et al, 1972) ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားမရှိခြင်း၏ကုသမှုများအတွက်ဘာဝနာ technique ကိုသုံးပြီးများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်ထံမှလာ၏။ အကဲဖြတ်၏သင်တန်းကာလအတွင်းကဒီလေ့လာမှုမှာတဦးတည်းစိတ်ရှည်သူ, အထူးသဖြင့်သူကလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသောအခါအချိန်များတွင်မှတ်သား, သူ့လိင်အင်္ဂါအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုတစ်ဦးကို virtual ပျောက်ဆုံးမှတ်ချက်ချခဲ့လို့မှတ်ချက်ချထားပါတယ်။ သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေ့ဆေးအဖြစ်ဖော်ပြထားနှင့်သူ၏အခွအေနေတီထွင်မတိုင်မီသူကြုံတွေ့ခဲ့တန်ဆာများနှင့်နွေးထွေးမှု၏အကျွမ်းတဝင်အသိကနှိုင်းယှဉ်။ နောက်ပိုင်းတွင်, ဒီလေ့လာမှုမှာအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီကဒီဖြစ်စဉ်အဘို့အပြကြသည် ဟူ. ၎င်း, ကိုးယောက်ျားထဲကခြောက်လလိင်အင်္ဂါခံစားချက်များကိုတစ်ဦးမရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ကျန်ရှိသောလူသုံးယောက်ဟာသူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါအာရုံထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျော့ကျသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
erectile တုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်အဆိုပါယန္တရားများအတွက် penile Spongiosum အနောက်ဆက်တွဲ engorgement အတူသွေးကြော musculature တစ်အပန်းဖြေပါဝငျသညျ။ erectile တုံ့ပြန်စဉ်အတွင်းလိင်အင်္ဂါဒေသများသို့အတှငျးမှမေးသောအခါ, တစ်ဦးချင်းစီလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုတန်ဆာများနှင့်နွေးထွေးမှု၏အာရုံကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
thermography ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားလိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု (Koshids & Sohado, 1977) ၏လေ့လာမှုသည်လိင်စိတ်နိုးထစေသောရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် ၂ မိနစ်အကြာတွင်လိင်အင်္ဂါပူနွေးလာသည်ကိုပြသခဲ့သည်။
ဒါဟာအလယ်တန်းခွန်အားမရှိခြင်း၏အချို့ကိစ္စလိင်အင်္ဂါနွေးထွေးမှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျတာဝနျရှိသူတို့အ psychophysiological စနစ်များအတွက်လိုငွေပြမှုပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်ဤအာရုံ reexperience ဖို့တစ်ဦးချင်းလေ့ကျင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းကိုပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်းစေခြင်းငှါတွေးဆခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ထင်ရှားအာရုံ၏တိုက်ရိုက် amplification များကိုပြောင်းလဲဇီဝကမ္မယန္တရားများ၏ locus သို့စုစည်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ကြဉ်းနိုင်သောကြောင့်တရားအားထုတ်သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အမြင့်မားတော်ပါတယ်သလိုပဲ။
အလယ်တန်းခွန်အားမရှိခြင်းနှင့် 32 နှစ်ပေါင်းတစ်အတောအတွင်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူကိုးလူနာကဒီလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံး 2-1 /2လအတွင်းတစ်ယုတ်နှင့်အတူတစ်လထက်ပိုပြီးအဘို့ဤလက္ခဏာရှိခဲ့ပါတယ်။ လေးအခြားသူတွေအနေနဲ့ Insidious လက္ခဏာတိုးတက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြနေချိန်တွင်ငါးလူနာတစ်ဦးစိတ်ထိခိုက်အခြေအနေအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်အတော်လေးစူးရှစတင်ခြင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခင်တစ်ဦးထက်ပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ရှိသည်ဖို့တော်မှာနှင့်အဆုံးစွန်သောတဦးတည်းအဖော်နှင့်အတူနာတာရှည်မကျေနပ်မှု၎င်းတို့၏အခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်သော။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုအဘယ်သူမျှမမူမမှန်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ကုသမှုဘာဝနာသုံးပြီးများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်အကြံပြုချက်သက်ရောက်မှု minimize လုပ်ဖို့အဖြစ်နှင့်အနောက်တိုင်းတတ်နိုင်သမျှတစျဦးစီရှင်းပြခဲ့သည်။ ညွှန်ကြားချက်ဆိုင်သောအရာကိုဆင်ခြင်လုပ်ငန်းစဉ်၏စက်ပြင်၌ပေးသောခဲ့သည်။ တရားအားထုတ်မှပဏာမအနေနဲ့သင့်လျော်သော setting ကို၏ရွေးချယ်မှုအဖြစ်အားလုံးပြင်ပမှာဖြစ်ရပ်များ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, ကြောက်စိတ်နှင့်အတွေ့အကြုံမသက်ဆိုင်သောစိတ်ကူးယဉ်မှတ်နေကြရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ set ကို၏မွေးစားပါဝင်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကျူးကျော်အတွေးများကို sidestepping ၏အနုပညာနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှပယ်မျောခြင်းမရှိဘဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိအမြင်ထိန်းသိမ်းများ၏တာဝန်ပေးခဲ့သညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလူနာထိုင်လျက်နှင့်အသက်ရှူ၏စည်းချက်အပေါ်သတိအာရုံစူးစိုက်အားဖြင့်တစ်ဦးအခြေခံအပန်းဖြေအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ဟုမေးခဲ့သည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အကြောင်းကို3မိနစ်ကိုယူ, ပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်းနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်ကြွက်သားသေံတစ်ကျိန်းဝပ်နိမ့်ဆုံးကျဆင်းသွား။ ထိုအချိန်တွင်လူနာသူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါဧရိယာမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုသူတို့ရဲ့အာရုံလွှဲပြောင်းဖို့နဲ့နွေးထွေးမှုဖြာ၏သာယာသောအာရုံ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်ဆင်ခြင်ခြင်း, ဒီတော့လုပ်နေသည့်အခါမဆိုတင်ပါးဆုံတွင်းကကြွက်သားတွေမဟုတ်တင်းမာနေစောင့်ရှောက်တာကိုမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ရုံးအတွက်ပဏာမလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်, တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ရှည် 15 မိနစ်ကာလအဘို့နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ငါးလူနာအလေ့အကျင့်များ 10 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အနည်းငယ်မျှသာလိင်အင်္ဂါ2ရက်အတွင်းနွေးထွေးမှု, နှစ်ယောက်အခြားသူများရဲ့အတွေ့အကြုံကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအာရုံခံစားမှုပိုမိုအားကောင်းလာပြီးလေ့ကျင့်ရေးဆက်လက်အဖြစ်ကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာရူးနှမ်းနိုငျသညျ။ နှစ်ဦးကျန်ရှိလူနာခဏအာရုံသတင်းပို့ပေမယ့်စဉ်ဆက်မပြတ်အတှေးအကျူးကျော်ခြင်းဖြင့်အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ကိုင်နိုင်သောအာရုံရေရှည်တည်တံ့နိုင်ဘူး။ ဤရွေ့ကားလူနာလှုံ့ဆော်ပေမယ့်, တသမတ်တည်းလိင်အင်္ဂါနွေးထွေးမှုအောင်မြင်ရန်မ erectile အရည်အချင်းကိုတိုးတက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုလူနာတ technique ကိုနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်ဖြစ်လာမတိုင်မီ7ပတ်2နေ့ရက်ကာလအဘို့တည်မြဲမှု, နှင့်အခြားသော။
လိင်အင်္ဂါနွေးထွေးမှုအကြောင်းကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်ခဲ့တယ်သူများသည်နောက်ဆက်တွဲဘာဝနာစမ်းသပ်မှုတွေတသမတ်တည်းကြောင့်မျိုးပွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ခုနစျပါးအောင်မြင်သောလူနာလိင်အင်္ဂါနွေးထွေးမှု၏ဆည်း၏2ရက်သတ္တပတ်အတွင်း erectile အတွေ့အကြုံများ၏ပြန်လာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Coital စွမ်းဆောင်ရည် presymptom အဆင့်ဆင့်မှပြန်သွားကြပြီဤလူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်, သုံးယောက်လူနာအတွက်ထက်ကျော်လွန်တိုးတက်လာပြီ။
နှစ်ဦးကိုလူနာပုံမှန်အားဖြင့် technique ကိုကျင့်သုံး၏ 10 မိနစ်ပြီးနောက်, ဘာဝနာပြည်နယ်ရှိနေစဉ်အလိုတော်မှာစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်စွမ်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Follow-up,3လအတွင်းမှာ erectile အရည်အချင်းကို၏အောင်မြင်မှုငါးခုလူနာအတွက်ကုထုံးအကျိုးအမြတ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုပြသပြီးနောက်။ တစ်ခုမှာလူနာ-up, နောက်ကိုလိုက်ရန်ဆုံးရှုံးသွားသောခဲ့သည်။
လူနာကဒီသေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံအချို့အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဘာဝနာနည်းစနစ် erectile အရည်အချင်းမရှိများ၏ကုသမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီနည်းလမ်းအဘို့အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီ, ဘာဝနာအလေ့အကျင့်နေ့စဉ်ဖယ်နှစ်ခု 15 မိနစ်ကာလကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်အမိန့်တစ်ခုခန္ဓာဗေဒအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အာရုံစိုကျကိုရှာခြင်းနှင့်အပူ၏ခံစားချက်များကိုများကိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက်ကွာမိမိတို့၏အတွေးစီးကနေဖြေလျှော့အချို့နိုင်စွမ်းရှိသည်ဖို့လုံလောက်လှုံ့ဆော်မှုများမှာ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာတပ်လှန့်ခြင်းနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ technique ကိုမှအကျိုးမပြုခဲ့သူ2တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းနှင့်အတူအချို့သောအခက်အခဲသို့မဟုတ်ဤရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏အခြားရှုထောင့်ရှိပုံရသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုမှာ, အချို့သောလေ့လာမှုတွေအတွက်အလယ်တန်းခွန်အားမရှိခြင်းကနေအလိုအလျောက်လွှတ်နှုန်းမြင့်မားဖြစ်သတင်းပို့ထားပါတယ်သတိပြုပါရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ အန်ဆာရီ (1976) 68 လအတွင်းကနဦးအကဲဖြတ်ပြီးနောက် 8% လွှတ်မှုနှုန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိသောတွေးတောဆင်ခြင်သူများသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ပြသခဲ့သည် (Goleman & Schwartz, 1976) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်သောဘာသာရပ်များသည်သူတို့၏ယခင်အတွေ့အကြုံများထက်လိင်စိတ်အခြေအနေများကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအားတားဆီးနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာဤလေ့လာမှုမှအောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုပိုမိုများပြားလာသည်ဟုအစီရင်ခံတင်ပြကြပြီး၊ ကုသမှုပုံစံကိုမတုံ့ပြန်သောအမျိုးသားနှစ် ဦး သည်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ technique ကို၏ထိရောက်မှုလည်းလိင်အင်္ဂါပေးစေလိုပါတယ်သို့ထိန်းချုပ်မှုလမ်းကြောင်း၏တိကျသောသင်ယူမှုအပေါ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေလိမ့်မည်။ သူတို့ကုသမှုမပြုမီနိုင်အောင်လုပ်ပေး, နှစ်ယောက်တစ်ဦးချင်းစီစိုက်ထူဖန်တီးတစ်ခုဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအစီရင်ခံဆန္ဒအလျောက်ဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့စေခြင်းငှါနိုင်ဘူးသော်လည်းအောင်မြင်သောဘာသာရပ်များ, လေ့ကျင့်ခန်း၏မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလိင်အင်္ဂါနွေးထွေးမှုအစီရင်ခံဆိုတဲ့အချက်ကို။
ဒီ technique ကို၏ကုထုံးဖြစ်နိုင်ခြေနောက်ထပ်လေ့လာမှုစောင့်ဆိုင်းဒါပေမယ့်ပြီးသားအလယ်တန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားနေရပြီးမရွေးတစ်ဦးချင်းစီမှအချို့မျှော်လင့်ချက်ချေးငှားရမည်။
Allison, ဂျေအသက်ရူအကာ Transcendental ဘာဝနာကာလအတွင်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet, 1, 833-834 (1970) ။
Anand, BK, Chhina, GS & Singh, ခ yogis မှ electroencephalographic လေ့လာမှု၏အချို့သောရှုထောင့်များ။ Electroencephalography နှင့်လက်တွေ့ Neurophysiology, 13, 452-456 (1961) ။
အန်ဆာရီ, JM သင်ျခြို: ဟောကိန်း (ကထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု) ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 128 ဗြိတိသျှဂျာနယ်, 194-198 (1976) ။
Benson, H. , Greenwood, MM & Klemchuk, အိပ်ချ်။ အပန်းဖြေမှုတုန့်ပြန်မှု - Psychophysiologic ရှုထောင့်နှင့်လက်တွေ့အသုံးချမှုများ။ ဆေးပညာအတွက်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်, 6, 87-98 (1975) ။
Benson, H. , Rosner, BA & Marzetta, BR ဘာဝနာကျင့်သုံးသောသွေးတိုးရောဂါရှိသူများသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ဂျာနယ်, 52, 80 (1973) ။
Brosse, တီတစ်ဦးက psychophysiological လေ့လာမှု။ ခေတ်သစ်အတွေးအခေါ်, 4, 77-84 (1946) တွင်အဓိကလက်ရှိ။
Goleman, D. & Schwartz, GE Meditation သည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 44, 456-466 (1976) ။
Griffith, အက်ဖ်တှေးတောဆငျခွသုတေသန: ၎င်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးသက်ရောက်မှု။ သိစိတ်ကို, စစ။ 138-161 ၏နယ်စပ်ဒေသ။ Ed က။ ဂျေ White က။ Avon, နယူးယော့ (1974) ။
ခွန်အားမရှိသောရောဂါရှာဖွေရေးအတွက် thermography ၏ Koshids, Y. & Sohado, ဂျေလျှောက်လွှာ။ ဆေးရုံ Tribune, 11, 13 (1977) ။
မာစတာ, WH & Johnson, VE လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံလောက်မှု။ Churchill, London (1970) ။
Maupin, တှေးတောဆငျခွတွင်ဒဗလျူ။ သိစိတ်ကို, စစ၏ပြောင်းလဲတိတ်။ 181-190 ။ Ed က။ မှန် CT tarts ။ Wiley, နယူးယော့ (1969) ။
ကုထုံးအဖြစ် Schwartz, GE ကဇီဝကမ္မထိန်းချုပ်ခြင်း: တချို့ကသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့ပြဿနာများကို။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်, 28, 666-673 (1973) ။
Wallace, RK & Benson, အိပ်ချ်။ ဘာဝနာ၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။ သိပ္ပံနည်းကျအမေရိကန်, 226, 84-90 (1972) ။